Vaovao - Fivoriana fanentanana “Fanatsarana ny fitantanana nomerika” an'i Kaihua Mould tamin'ny 2021 sy ny kaonferansa «Otrika miaramila kendrena stratejika» natao tao amin'ny fihaonambe
Fivoriana fanentanana “Fanatsarana ny fitantanana nomerika” an'i Kaihua Mould tamin'ny taona 2021 sy ny kaonferansa «Otrika miaramila kendrena» natao ny fihaonambe
Tamin'ny 2-3 martsa 2021, ny fivorian'ny fanentanana “fanatsarana ny fitantanana nomerika” sy ny fivorian'ny fianianana “stratejika kendrena stratejika” dia natao tao amin'ny foiben'i Huangyan sy ny orinasa Sanmen. Mpiasa maherin'ny 1.000 no nanatrika ny fivoriana.
Fivoriana fanentanana “Fanatsarana ny fitantanana nomerika”
Tamin'ny fiandohan'ny fivoriana dia nizara taminao ny filoha Liang Zhenghua:
Amin'ny taona 2020, ny sampana isan-karazany amin'ireo orinasa roa ao Huangyan Sanmen dia hifantoka amin'ny foto-kevitra mitarika ny "kalitao avo lenta sy fahombiazana ary tsingerina fohy", izay hanan-kery isaky ny tetikasa mahomby, ary hamirapiratra amin'ny loka amam-boninahitra.
Ny baiko tamin'ny 2020 dia nitombo 40,37% isan-taona
Ny vidin'ny vokatra 2020 dia nitombo 13,77% isan-taona
Tranga fanatsarana 668 KMS mitotaly
Tranga fanatsarana 1184 KMVE mitotaly
2021 no taona fanatsarana ny fitantanana nomerika an'i Kaihua. Ny sampana rehetra dia tokony hifantoka amin'ny fampandrosoana avo lenta, hanatsara ny fitantanana nomerika ny orinasa, ary hamita ireo tondro ho an'ny 2021, ary hahatratra ireto fepetra takiana manaraka ireto:
1. Tsy maintsy miziriziry amin'ny kalitao aloha
2. Tokony ho ivon'ny mpanjifa izy io ary hanome vahaolana ho an'ny mpanjifa
3. Ny vidin'ny orinasa sy ny fandany dia tsy maintsy ahena
4. Ny fenitra manara-penitra dia tokony harahina
5. Ilaina ny fanatsarana ny haavon'ny informatization sy ny fanafainganana ny fivoaran'ny nomerika
Nandritra ity fihaonambe ity dia nidera ireo vondron'orinasa miavaka sy mpiasa miavaka notsongain'ireo departemanta isan-karazany ny orinasa tamin'ny taona 2020. Maromaro ny mari-pankasitrahana 5 sy loka 11 ho an'ny isam-batan'olona natolotra ary 54 ny isan'ireo mpiasa nandray ny dingana handray ireo loka.
Ny fandaharam-potoana faharoa amin'ity fihaonambe ity dia ny famoahana ny fivorian'ny fianianana "filaminana milamina stratejika".
Ny filoha lefitra mpanatanteraky ny orinasa sy ny mpitantana ny sampana tsirairay dia nanao fianianana ary nanao sonia tsirairay ny baikon'ny tafika, ary avy eo ny filoha Liang Zhenghua dia nanome ny saina ho an'ny departemanta tsirairay.
Naneno ny amponga ady, ary napetraka ny filaminan'ny tafika. Ny filaharan'ny miaramila no tanjona, nefa koa ny fampanantenany. Ny mpiasa rehetra dia hitondra ny andraikitra mavesatra eo an-tsorony ary hampihatra izany amin'ny hetsika, ka ny teny dia tsy maintsy atao ary ny asa dia tokony ho hentitra!
Famoahana ny kaonferansa fianianana "tetikady miaramila kendrena stratejika"
Tapitra ny ririnina, mamiratra ny vahindanitra
Misaotra ry Kaihua mianakavy
Amin'ny taona 2020, hiaraka amin'ny sambo iray isika, ary hifandray tanana
Hitohy amin'ny 2021 isika
Aza adino ny fikasana tany am-boalohany ary mandrosoa amin-kerim-po
Fotoana fandefasana: Mar-20-2021